नेपाल आज | विन्ति छ ! हामीलाई सुकिलामुकिला र देश त्यागेको नभन्नु होला ! (भिडियोसहित)
गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं सम्मेलनमा पनि विगतमा जस्तै यसपटक पनि एउटा प्रश्न उठ्यो, ‘ देश छोडेर जानेहरुको के को राष्ट्र प्रेम ? दुई चार पैसा कमाएर सुकिलोमुकिलो हुँदैमा देशप्रेम हुन्छ ?’
संघको नवौं सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकाबाट नेपाल आएका पत्रकार तथा एनआरएन सदस्य गौतम दाहाल यो प्रश्न सुनेपछि विक्षिप्त भएका छन् । नेपाल आजसंगको कुराकानीमा उनले सम्पूर्ण नेपालीलाई हात जोडेर आफूहरु नेपाली नै भएकाले कुनैपनि शंका नगर्न आग्रह गरे ।
दाहालले भने, ‘ कृपया ! हामीलाई सुकिलामुकिला र देश त्यागेकाहरु नभन्दिनुहोला । हामी बाध्यताले परदेश गएका हौं । अहिले विदेशमा बसेर जे गरिरहेका छौं त्यसबाट केही ने केही रुपमा नेपाल र नेपालीलाई पनि फाइदा पुगेको छ । हामीमा अथाह देशप्रेम छ । नेपाल र नेपालीप्रति हामी पूर्ण समर्पित छौं । यो देश र यहाँ रहेका दाजुभाई दिदीबहिनीका लागि केही गर्न चाहन्छौं । ’
लामो समय नेपालमा पत्रकारिता गरेका दाहाल अमेरिका बसेको १४ वर्ष नाघिसकेको छ । उनी अमेरिकामा रेष्टुरेन्ट चलाइरहेका छन् । ‘एनआरएनए’ विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हक हीतका लागि स्थापना भएको भएपनि पछिल्लो समय यसले नेपाल र नेपालीको हीतमा प्रशस्त काम गरिरहेको उनको दावी छ ।
संघले १८ वर्षमा गरेका सम्पूर्ण कामको समीक्षा हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ । यो विषयमा संघ भित्र पनि ब्यापक छलफल भैरहेको छ । संघको नेतृत्वमा पुग्नेहरुले आफनो नीजि ब्यापार व्यवसाय र आफनो व्यक्तित्व विकासमा मात्र ध्यान दिएको गुनासो आइरहेकाले समीक्षा अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।
गौतमका अनुसार संघमा राजनीति ब्याप्त छ । अहिले नवौं सम्मेलनमा त लाजालाग्ने ढंगले राजनीति प्रकट भयो । उनी भन्छन्, ‘ एनआरएनएको चुनाव विद्यार्थी संगठनको चुनाव जस्तो देखियो । प्रजातान्त्रिक, बामपन्थी समूहका नाममा एनआरएनए विभाजित हुने खतरा छ । नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरुले एनआरएनमाथि प्रभाव जमाइरहेका छन् । संघका नेताहरु पनि दल र नेताहरुसंग साँठगाँठ गर्न थाले । यसले एनआरएनलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँछ । ’
यसपटकको नवौं सम्मेलनमा सत्तारुढ दल नेकपाले एनआरएनलाई आफनो भ्रातृसंगठनको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्यो । राष्ट्रपति प्रमुख अतिथी भएको उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अध्यक्षता ग्रहण गर्न किन लगाइयो ? व्यवस्थापक र आयोजकले त्रुटी गरे भन्दैमा मन्त्रीले पनि गल्ती गर्न मिल्छ ?
संघको चुनावमा विकृती पनि बढ्न थालेका छन् । पैसाको खोलो बगाइएको छ । पैसाको भरमा चुनाव जित्ने परम्परा एनआरएनमा पनि बस्न थाल्यो । काम गरेर पो चुनाव जित्ने हो, तर पैसा नै सबथोक रहेछ भन्ने यसपटकको चुनावले पनि पुष्टि गर्यो । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
‘एनआरएन’ हरुलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिने विषयमा नेपाल सरकार र यहाँका दलहरु हच्किरहेका छन् । नेताहरुले विदेश जाँदा एउटा कुरा र फर्केपछि अर्को कुरा गर्ने गरेका छन् । यो दोहोरो मापदण्डले अन्योल र द्वन्द्व मात्र सृजना गर्छ ।
गौतम भन्छन्, ‘ दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भूमिका नदिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । ’
गैर आवासिय नेपाली संघको गरिमा कायम राख्न संघ भित्रको राजनीतिक ध्रवीकरण अन्त्य गर्नु नै नयाँ नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । संघलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन सक्नु नै नयाँ नेतृत्वको सफलता हुनेछ ।